Shikhar Post » सगरमाथा फाईनान्सका सीईओ मन बाहिङ अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टर
सगरमाथा फाईनान्सका सीईओ मन बाहिङ अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टर
को हुन् मन बाहिङ ?
काठमाडौं, २५ भदौ । तत्कालिन सगरमाथा फाईनान्स लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मन बाहिङ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको संचालक समिति सदस्य(बोर्ड अफ डाइरेक्टर)मा मनोनित हुनुभएको छ । गत हप्ता उहाँ बैंकको संचालक समिति सदस्यमा मनोनित हुनुभएको हो ।
वित्तिय संघसंस्थाका प्रथम उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका बाहिङले सगरमाथा फाईनान्सको सिईओ भएर फाईनान्सलाई उचाईमा पुर्‍याउनुभएको थियो । कहि महिना अघिमात्र सगरमाथा फाईनान्स सेन्चुरी बैंकसँग मर्ज भएपछि बाहिङ अब के गर्लान् भन्ने धेरैको जिज्ञासा थियो ।
भद्रपुर झापामा २०१६ साल असोज १४ गते जन्मनुभएका बाहिङले गोभरमेन्ट कलेज, दार्जिलिङबाट स्नातक र मनीपाल युनिभरसीटी, ईन्डियाबाट एम.बि.ए. (बैकिङ्ग स्पेशेलाईजेशन) गर्नुभएको छ । अध्ययनपछि २०३९ सालतिर जन्म गाँउ झापा फर्किनुभएका दार्जिलिङमा रहदा वेष्ट बेङ्गालमा सिभिल सर्भिस अफिसरमा भिड्ने योजना बनाउनुभएको थियो तर बुबाले रुचाउनुभएन ।
‘बाबाले आफ्नै देश र माटोमा सुन फलाउनुपर्छ, खुरुक्क गाँउ फर्क भन्नुभयो’ उहाँले त्यत्तिखेरको परिवेशलाई सम्झदै भन्नुभयो ‘बाबा अलि हक्की स्वाभावको हुनुहुन्थ्यो, झिटीगुम्टी कसेर घर आउनु भनेपछि म आएँ ।’ झापा फर्केपछि मन बाहिङले घरको केहि कोस टाढामा रहेको शान्ति आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा अध्यपन (टिचिङ) सुरु गर्नुभयो । लगभग तीन वर्ष शिक्षण पेशा अंगालेपछि उहाँलाई सपनाको सहर राजधानी काठमाडौं छिर्ने हुटहुटी चल्नथाल्यो ।
काठमाडौंमा केहि समय बिताएर गाँउ फर्कनेहरुको छिमेकमा छुट्टै शान थियो त्यत्तिखेर । ‘मैले सोचे राजधानी बसेपछि यसलाई गोजीमा बोक्न सकिन्छ ।’ उहाँले थप्नुभयो । अब मन बाहिङलाई कुनै बिलम्ब नगरी राजधानी हान्निनु थियो । त्यसमा परिवारको, विशेषगरी बुबाको स्वीकृति आवश्यक थियो । बुबालाई सुनाउनुभयो तर, काठमाडौं छिर्ने छोराको योजनामा बुबाले असहमति मात्रै जनाउनु भएन काठमाडौमा के खर्चले पढ्छस् र जिन्दगी गुजार्छस् भन्दै निरुत्साहित पार्न खोज्नुभयो । बुबाले आफ्नो छोरा काठमाडौं गएर नबिग्रियोस भन्ने आशयले त्यस्तो भन्नुभएको थियो । तर उहाँको चाहानालाई कसैले पनि रोक्न सकेन ।
बाहिङलाई २०४२ साल चैत्र महिनामा राजधानी आउने सायत जुर्‍यो । बुबाको असहमतिप्रति आफ्नो असहमति पेश गर्दै काठमाडौंमा संघर्ष गरेर केही गर्ने संकल्प सहित झापाबाट सपनाको राजधानी हुईकिनुभयो उहाँ । पढाईमा मध्याम भएपनि बाहिङ सानैदेखि प्रत्येक ठाँउमा आफ्नो सिर्जनशिलताको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो । जसले उहाँलाई सफल हुन सधैं सहयोग मिल्दै आएको छ । राजधानी प्रवेशको छोटो समयमै नेपाल ट्राभल म्यागाजिनमा एकाउन्ट अफिसरको सेवा सुरु गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो । त्यहाँ २९ दिन काम गर्नुभएपछि तारागाँउ रेजेन्सी (ह्यात होटेल) मा काम थाल्नुभयो । त्यहाँ काम गर्दैगर्दा बाँसबारी जुत्ता कारखानामा लेखा अधिकृतमा दरखास्त दिई नाम पनि एक नम्बरमा निकाल्नुभयो ।
तर तारागाँउ रेजेन्सीमै एक्टीङ अफिसरको जिम्मेवारीसहित सेवा/सुविधा बढाउने भएपछि त्यहि रहने निर्णय लिनुभयो । सोही क्रममा हेल्भटास नेपाल पोखरामा पनि उहाँले सेवाको अवसर पाउनुभएको थियो तर जानुभएन । तारागाँउ रेजेन्सीमै निरन्तर क्रियाशिल रहनुभयो । उहाँलाई २०४८ वैशाखमा यूएनको एग्रो फरेस्टी परियोजनामा म्यानेजरको रुपमा काम गर्ने अवसर मिल्यो । बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरी यो प्रोग्राम सञ्चालन भएको थियो । जसले नेपालमा पहिलो पटक प्लाईवुड कारखानाको स्थापना गरी उत्पादन सुरु गरेको थियो । त्यो परियोजनामा करिब आधा दशक काम गरेपछि मन बाहिङले राजधानी फिर्ने योजना बनाउनुभयो । हरेक काममा आफ्नो सिर्जनशिलताको प्रयोग गर्नुपर्ने मान्यता राख्ने बाहिङमा सानैदेखि उद्यमशिल (व्यवसायिक) सोच थियो । असम्भव प्राय: केहि हुदैनथ्यो । हरेक चिजलाई पोजिटिभ एटिच्युडले हेर्नु उहाँको चारित्रिक विशेषता हो । राजधानी फर्केपछि उहाँले केहि न केहि व्यवसाय गर्ने सोच बनाउदै हुनुहुन्थ्यो, त्यहि क्रममा काठमाडौंको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलको एक क्याफेमा गोकर्ण राईलगायत पुर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिक सेवाबाट निवृत्त व्यक्ति र समुदायका अगुवाहरुसँग भेट हुनपुग्यो ।
त्यो पहिलो भेटमा चिनजानसँगसँगै समुदायको आर्थिक सामाजिक अवस्थाको बारेमा सामान्य कुराकानी भयो । जहाँ व्यवसायिक सोच र संस्कार अपेक्षित नरहेको धेरैको अभिव्यक्ति रह्यो । बाहिङले त्यहि परिवेशमा प्रस्ताव राख्नुभयो, ‘सामुहिक रुपमा केहि व्यवसायको सुरुवात गरौं ।’ उक्त प्रस्तावलाई सबै जनाले सहज रुपमा सहमति जनाए । त्यहि समय किरात जिमी राई समुदायको भाषा, संस्कृति संरक्षण र सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण एवं उन्नतिका लागि जिमी (राई) उत्थान समाजको स्थापना गर्ने काम भयो । भेटघाट र छलफलको क्रम बढ्दै गएपछि, अन्तत एउटा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्ने सहमति भयो । जुन पछि सगरमाथा फाईनान्स लि. को रूपमा स्थापित भयो र उसले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमै आधा दर्जन शाखा विस्तार गरेर सेवा उपलब्ध गराउन सफल भयो । उहाँहरुकै पहलमा २०५६ सालमा स्थापित सगरमाथा फाइनान्स २०५७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएको थियो । जुन केही महिनाअघि मात्रै सेन्चुरी बैंकसँग मर्ज भएको छ ।
बाहिङको व्यक्तित्व बैंकको सिईओ, सकरात्मक सोचका पर्याय यतिमा मात्र सिमित छैन । विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध रहेर सक्रिय रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका उहाँ समानता र न्यायमा आधारित समाज निर्माणका अभियान्ता पनि हुनुहन्छ । राज्यको मुलधारभन्दा बाहिर रहेका जाति, समुदायहरुलाई माथि नउठाउँदासम्म सवल र समृद्ध मुलुक निर्माण हुन सक्दैन । त्यस निम्ति उनीहरुलाई रोजगारी, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गरिनु आवश्यक छ भन्ने उहाँको प्रष्ट धारणा हो ।
यहि अवधारणाको उपज किरात राई यायोक्खामा रहदा विभिन्न छलफल र अन्तरक्रियाहरु सुरु गर्नुभएको थियो । आज आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएका वर्गले निजामती सेवा लगायतमा आरक्षण पाउनुमा उहाँको ठूलो देन छ । त्यसअर्थमा मन बाहिङको भूमिका व्यक्ति, समाज र सिंगो राष्ट्रको लागि अवीस्मरणीय रहेको छ ।
हार्दिक बधाई तथा शुभकामना मन बाहिङ
P. B. Kulung
Khusi Lagyo ! Bahing sirlai hardik badhai tatha suvakamana !